ဒီပိတ်ရက်မှာ လည်ဖို့ပတ်ဖို့ ပျော်စရာပွဲလေးတွေ စောင့်ကြိုနေပါပြီ - For her Myanmar
ဒီလိုအမိုက်စားပွဲတွေ ရှိနေတာကို အိမ်တွင်းမအောင်းချင်စမ်းပါနဲ့
ယောင်းတို့ရေ … ပိတ်ရက်ရယ်လို့ ရောက်လာတာနဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ချစ်ချစ်နဲ့ ဘယ်သွားလို့ သွားရမှန်းမသိဘူး ဖြစ်နေကြတယ်မှတ်လား ? ဒါတွေ ကြိုသိလို့ stella ကနေ ဒီပိတ်ရက်အတွက် သွားစရာ နေရာတွေကို ရှာဖွေစုစည်းပေးထားတယ်နော် …
အချိန် : ညနေ (၄) နာရီ – ည (၁၂) နာရီ
နေရာ : The ONE Entertainment Park
နေ့ရက် : ဧပြီ (၇) ရက် (တနင်္ဂနွေ)
Rave မယ် ကဲမယ်ဆိုတဲ့ EDM ပရိသတ်ယောင်းတွေအတွက် BASS Kingdom Music Festival … ဘယ်သူတွေပါမှာလဲ ? EDM ကြိုက်နှစ်သက်သူတိုင်း သိတဲ့အထိ နာမည်ကြီးတဲ့ Yellow Claw, Moksi, Wiwek, Dolf တို့ ပါဝင်သွားမှာပါ။ လက်မှတ်ကြေးကတော့ GA ၃၅၀၀၀ ကျပ်နဲ့ VIP ၆၅၀၀၀ ကျပ်ပါ။ Myanmar Premium နဲ့ Barong Family တို့ရဲ့ ပွဲဆိုတော့ ပြောစရာမလိုအောင် မိုက်နေမှာကတော့ အသေအချာပဲနော် …
Yangon Zay – Thingyan Edition
အချိန် : နေ့လည် (၁၂) နာရီ – ည (၈) နာရီ
နေရာ : ရန်ကုန်ဈေး ၊ The Tea Factory
နေ့ရက် : ဧပြီ (၆) ရက် နှင့် (၇) ရက်
အပတ်စဉ်ကျင်းပနေကြဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်ဈေးက ဒီတလော အတော်လေးကို ရေပန်းစားနေတာရော … ဓာတ်ဖမ်းလို့လှပြီး မိန်းမချောတွေပေါတဲ့ ရန်ကုန်ဈေးကို မသွားဖူးသေးရင် ခေတ်မမီဘူးဆိုပဲ။ အဲ့သလို သတင်းကြီးနေတဲ့ ရန်ကုန်ဈေးက ဒီတစ်ခါတော့ နှစ်သစ်ကူးအတာသင်္ကြန်အပြင်အဆင်တွေနဲ့ ယောင်းတို့ကို စောင့်ကြိုနေပါတယ်တဲ့။ ဒိတ်မအောက်ရလေအောင် အရောက်သွားပြီး ဓာတ်လှလှဖမ်းကြစို့လား ?
For Her Myanmar Thingyan Flash Sale
နေ့ရက် : ဧပြီ (၃) ရက် – ဧပြီ (၉) ရက်
For Her Myanmar နဲ့ Shop.com.mm တို့ပူးပေါင်းပြီး သင်္ကြန်မတိုင်ခင် ယောင်းတို့လိုချင်တာတွေ တစ်နေရာတည်းမှာ အစုံအလင်ရနိုင်ဖို့ online flash sale လေးစီစဉ်ထားပါတယ်။ အွန်လိုင်းကနေပဲ စိတ်ကြိုက်ဈေးဝယ်ထွက်နိုင်တဲ့အပြင် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဒစ်စကောင့်တွေ၊ ကူပွန်တွေနဲ့ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွေလည်း ပါဝင်တာမို့ အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းသက်သာတာပေါ့။ နောက်ထပ် ဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေက ယောင်းတို့ကို စောင့်ကြိုနေသေးလဲဆိုတာ သိရဖို့ For Her Myanmar Shopping page ကို see first လုပ်ထားဖို့ မမေ့နဲ့ဦးနော်။ Online Flash Sale မှာ ပါဝင်ဖို့စိတ်ဝင်စားရင်တော့ Shop.com.mm application ကို Android ဆိုရင် ဒီလင့်မှာ IOS ဆိုရင် ဒီလင့်မှာ Download လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။
BKK Night Market April Special
အချိန် : ညနေ (၄) နာရီ – ည (၁၀) နာရီ
နေရာ : ကန်တော်ကြီး မျှော်စင်ကျွန်း
နေ့ရက် : ဧပြီ (၅) ရက် မှ (၇) ရက်
BKK Night Market ဆိုတာနဲ့ သွားရည်ယိုချင်စရာ အစားအသောက်ပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်ကို ပြေးမြင်သွားပြီ မှတ်လား ? မညာချင်စမ်းပါနဲ့။ BKK Night Market ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံက ကောင်းပေ့ဆိုတဲ့ အစားအသောက်မျိုးစုံ၊ အသုံးအဆောင်မျိုးစုံကို ခပ်မိုက်မိုက်အပြင်အဆင်တွေနဲ့အတူ ရောင်းချပေးမှာမို့ စိတ်ကြိုက်စားနိုင်၊ ဝယ်နိုင်မယ့် အခွင့်အရေးပါ။
ကဲ … ဒီတစ်ပတ်မှာ လည်စရာတွေ အများကြီးပဲ ဟုတ် ။ အကြိုက်ဆုံးပွဲကို ရွေးချယ်ပြီး သွားဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတော့နော်။
ဒီလိုအမိုကျစားပှဲတှေ ရှိနတောကို အိမျတှငျးမအောငျးခငျြစမျးပါနဲ့
ယောငျးတို့ရေ … ပိတျရကျရယျလို့ ရောကျလာတာနဲ့ သူငယျခငျြးနဲ့ ခဈြခဈြနဲ့ ဘယျသှားလို့ သှားရမှနျးမသိဘူး ဖွဈနကွေတယျမှတျလား ? ဒါတှေ ကွိုသိလို့ stella ကနေ ဒီပိတျရကျအတှကျ သှားစရာ နရောတှကေို ရှာဖှစေုစညျးပေးထားတယျနျော …
အခြိနျ : ညနေ (၄) နာရီ – ည (၁၂) နာရီ
နရော : The ONE Entertainment Park
နရေ့ကျ : ဧပွီ (၇) ရကျ (တနင်ျဂနှေ)
Rave မယျ ကဲမယျဆိုတဲ့ EDM ပရိသတျယောငျးတှအေတှကျ BASS Kingdom Music Festival … ဘယျသူတှပေါမှာလဲ ? EDM ကွိုကျနှဈသကျသူတိုငျး သိတဲ့အထိ နာမညျကွီးတဲ့ Yellow Claw, Moksi, Wiwek, Dolf တို့ ပါဝငျသှားမှာပါ။ လကျမှတျကွေးကတော့ GA ၃၅၀၀၀ ကပျြနဲ့ VIP ၆၅၀၀၀ ကပျြပါ။ Myanmar Premium နဲ့ Barong Family တို့ရဲ့ ပှဲဆိုတော့ ပွောစရာမလိုအောငျ မိုကျနမှောကတော့ အသအေခြာပဲနျော …
အခြိနျ : နလေ့ညျ (၁၂) နာရီ – ည (၈) နာရီ
နရော : ရနျကုနျဈေး ၊ The Tea Factory
နရေ့ကျ : ဧပွီ (၆) ရကျ နှငျ့ (၇) ရကျ
အပတျစဉျကငျြးပနကွေဖွဈတဲ့ ရနျကုနျဈေးက ဒီတလော အတျောလေးကို ရပေနျးစားနတောရော … ဓာတျဖမျးလို့လှပွီး မိနျးမခြောတှပေေါတဲ့ ရနျကုနျဈေးကို မသှားဖူးသေးရငျ ခတျေမမီဘူးဆိုပဲ။ အဲ့သလို သတငျးကွီးနတေဲ့ ရနျကုနျဈေးက ဒီတဈခါတော့ နှဈသဈကူးအတာသွင်ျကနျအပွငျအဆငျတှနေဲ့ ယောငျးတို့ကို စောငျ့ကွိုနပေါတယျတဲ့။ ဒိတျမအောကျရလအေောငျ အရောကျသှားပွီး ဓာတျလှလှဖမျးကွစို့လား ?
နရေ့ကျ : ဧပွီ (၃) ရကျ – ဧပွီ (၉) ရကျ
For Her Myanmar နဲ့ Shop.com.mm တို့ပူးပေါငျးပွီး သွင်ျကနျမတိုငျခငျ ယောငျးတို့လိုခငျြတာတှေ တဈနရောတညျးမှာ အစုံအလငျရနိုငျဖို့ online flash sale လေးစီစဉျထားပါတယျ။ အှနျလိုငျးကနပေဲ စိတျကွိုကျဈေးဝယျထှကျနိုငျတဲ့အပွငျ စိတျလှုပျရှားစရာ ဒဈစကောငျ့တှေ၊ ကူပှနျတှနေဲ့ ကံစမျးမဲအစီအစဉျတှလေညျး ပါဝငျတာမို့ အခြိနျကုနျလူပငျပနျးသကျသာတာပေါ့။ နောကျထပျ ဘယျလိုအစီအစဉျတှကေ ယောငျးတို့ကို စောငျ့ကွိုနသေေးလဲဆိုတာ သိရဖို့ For Her Myanmar Shopping page ကို see first လုပျထားဖို့ မမနေဲ့ဦးနျော။ Online Flash Sale မှာ ပါဝငျဖို့စိတျဝငျစားရငျတော့ Shop.com.mm application ကို Android ဆိုရငျ ဒီလငျ့မှာ IOS ဆိုရငျ ဒီလငျ့မှာ Download လုပျထားလို့ရပါတယျ။
အခြိနျ : ညနေ (၄) နာရီ – ည (၁၀) နာရီ
နရော : ကနျတျောကွီး မြှျောစငျကြှနျး
နရေ့ကျ : ဧပွီ (၅) ရကျ မှ (၇) ရကျ
BKK Night Market ဆိုတာနဲ့ သှားရညျယိုခငျြစရာ အစားအသောကျပေါငျး သောငျးခွောကျထောငျကို ပွေးမွငျသှားပွီ မှတျလား ? မညာခငျြစမျးပါနဲ့။ BKK Night Market ရဲ့ ထုံးစံအတိုငျး ထိုငျးနိုငျငံက ကောငျးပဆေို့တဲ့ အစားအသောကျမြိုးစုံ၊ အသုံးအဆောငျမြိုးစုံကို ခပျမိုကျမိုကျအပွငျအဆငျတှနေဲ့အတူ ရောငျးခပြေးမှာမို့ စိတျကွိုကျစားနိုငျ၊ ဝယျနိုငျမယျ့ အခှငျ့အရေးပါ။
ကဲ … ဒီတဈပတျမှာ လညျစရာတှေ အမြားကွီးပဲ ဟုတျ ။ အကွိုကျဆုံးပှဲကို ရှေးခယျြပွီး သှားဖို့ပွငျဆငျထားပါတော့နျော။
Tags: #weekend, Event, flash sale, Fun, night market, what to do, where to go